Suspicious Activity - isiZulu
SARS Home > Targeting Tax Crime > Report a tax crime > Suspicious Activity - isiZulu
​BIKA IZENZO EZISOLISAYO
Kuyasikhuthaza ukuninga kwakho ukubikela-SARS ngezenzo ezisolisayo ezingase zibe nokuxhumana nezentela. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ukhokha ingxenye yakhe efanele yentela lapha eNingizimu Afrika
Yini esiyibheka njengesenzo esisolisayo?
Isenzo esisolisayo sibandakanya:
Umuntu kumbe ibhizinisi okufanele ngabe bayathela kepha kabakhokhi nahlobo lunye lwentela.
Umuntu noma ibhizinisi baqashe abantu badonsa i-PAYE kubasebenzi kepha akabaniki isitifiketi se-IRP5.
Impahla ethekeliwe edayiswayo ezimakethe ngenani eliphansi “kunezindleko zokugawula” okusho inani elingaphansi kwezindleko zokuyithenga, zokuyithutha nokukhokha iNtelantengo kanye nentelamithekelo ekungeneni kwayo ezweni.
Umuntu kumbe ibhizinisi abafanelwe ngukuthel intela thize, ababhalisele ukuthele, kepha kabazilethi izimbuyiselo zentela kwa-SARS.
Umuntu ophila ngezindleko ezingaphezu kwephakethe lakhe – oveza impilo ephezulu ngokungavamile okungahambisani nezinga lezezimali zabangenisa njengaye.
Umthekeli (kubandakanya nomthekelisi)okutholakale ukuthi akadalulanga, udalule ngokungeyikho kumbe udalule ngaphansi impahla ngesikhathi ithekelwa kwaze kweva isikhathi esisodwa.
Umthekeli (kubandakanya nomthekelisi)ongena kwiVawusha YokuLungisa (Voucher of Correction) okungaphezu kwesigameko esisodwa.
Umthekeli (kubandakanya nomthekelisi) otholokale ethekela impahla engekho semthethweni (izidakamizwa, izibhamu, iziqhumane, impahla echazwe nge-CITE, izimpahla eziyingqulathi).
Umuntu noma ibhizinisi okusolakala sengathi baxube uwoyela noma ngabe owahlobo luni.
Umuntu otholakale ephethe umthamo omkhulu wemali ezwayo yabezizwe engena noma ephuma eNingizimu Afrika.
Umuntu noma ibhizinisi bethengisa impahla okusolakala ukuthi ingungqulathi weyezekayo ungqo wakhona.
Umuntu noma ibhizinisi okutholakale ukuba bathekele kaninginingi besebenzisa ikhodi ejwayelekeli yezemithekelo i-7070 kuSomqulu Wokufakwa KwamaLungelo (Bill of Entry)
Uthola imali ngezenzo zobugebengu
Umuntu noma ibhizinisi eliletha izicelo zeNtelantengo (VAT) ezingukukhwabanisa futhi ezingavezi ubuqinisio.
Umuntu noma ibhizinisi okufanelekile lizibhalisele i-VAT kepha kababhalisile.
Ubushompeshompe basethala laseMithekelweni
Amabhizinisi noma abantu abayingxenye yokufaka imali ezikhwameni ezingahambisani nemigomo evamile.
Umuntu noma amabhizinisi abakweleta u-SARS ngemva kokubuyekezwa kepha kabamkhokheli u-SARS.
Umuntu ongethuli okuliqiniso kwimbuyiselo yakhe kumbe kwakuletha kwa-SARS.
Kumele wenzeni uma wazi ngesenzo esisolisayo?
U-SARS uyaludinga usizo lwakho ekuqinisekiseni iNingizimu Afika ethobela imigomo yentela. Uma wazi umkhokhintela kumbe ikhasimende lezemithekelo ongathobeli imithetho yentela, sicela wazise u-SARS ngokushesha kwegeza embizeni yefutho ngokwenza lokhu;
Ngokugcwalisa ifomu lezenzo ezisolekayo lapha kwi-inthanethi; kumbe
Ushayele ucingo emgudwini wezokukhwabanisa nenkohlakalo ku-0800 00 28 70
Ngenxa yokuba imibiko efana nale ivamise ukusetshenziswa budedengu, u-SARS njelo uzoqinisekisa okuqukethwe kuyo andukuba athathe izinyathelo. Khumbula ukuba kawucelwa ukuba usole abakhokhintela ngobugengu – ucelwa nje ukuba ufake umbiko uma ukholwa ngukuthi isenzo siyasolisa futhi kudingeka ukuba u-SARS aqinisekise ukuthotshelwa kwemigomo yentela neyezemithekelo.Ifomu lokubika izenzo ezisolisayo liqopha ingxenye encane yemininingwane edingwa ngu-SARS ukuze akwazi ukubhekana nokulethwa nguwe ngokungathobi. Ukugcwaliswa kwaleli fomu kungadinga imizuzu embalwa esikhathini sakho, futhi liqukethe izingxenye ezithile ezidingekayo ukuze kube lula ukwenziwa kwalo msebenzi. Sicela usebenzise uhlu oluyi “drop down” (olwehlayo) ukuqoka emakhethelweni kuleso naleso sikhala.
U-SARS uyabonga ngesikhathi nomzamo wakho ekugcwaliseni leli fomu. Unalo ikhethelo lokuhlala ungaziwa nokho-ke uyacelwa ukuba ufake imininingwane yakho, njengalokhu lokho kungasiza abaphenyi ukuba bathole olunye ulwazi ngokuhamba kwesikhathi. Sicela uhlale ngokuqiniseka ukuba kawusoze wahlonzwa lokhu kuyohlala kuyimfihlo. Imithetho-zimiso(legislation) iyakuqikelela ubumfihlo bemininingwane enikwe u-SARS.
Last Updated: 16/09/2016 9:41 AM ​